चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणः बाबुरामको ६ बुँदे सुझाव ,रेल बनाउँदा ऋणजालमा फस्नुहुँदैन् ! – Life Nepali
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणः बाबुरामको ६ बुँदे सुझाव ,रेल बनाउँदा ऋणजालमा फस्नुहुँदैन् !
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणः प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको ६ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, २३ असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाइृ महत्वपूर्ण पाँच सुझाव दिएका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटरमा सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सि आगामी शनिबार काठमाडौं आउँदैछन् । दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आउन लागेका सीसँग नेपालले महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।यही सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले लिखित रुपमै सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट ६ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्,‘महामहिम चीनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा सरकारले मागे अनुसार यस्तो सुझाव दिइयो : भन्दै भट्टराईले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे सुझाव यस्ता छन्- १. मुख्यत: चीन, भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो चासोलाई अवसरको रूपमा लिने; तीनवटैसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्ने; गतिशील शान्तिवाद/तटस्थताको नीति लिने; BRI र IPS दुवैबाट लाभ लिने; भारत-चीनबीच आर्थिक सेतुको रूपमा विकास गर्ने।
Previous सी को स्वागत गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै एयरपोर्ट जाने
Next चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई सोल्टीमा राखिने, नेपाली दाल–भात–तरकारी चखाउने !